TALATA 23 JOLAY 2019
FESTIVAL TSOLABE ANDIANY FAHA-9 : Nomen-danja manokana ny kolontsaina
Ny trozona ( zagnaharibe) sy ny ranomasina ary ny fisian’ny karazan-trondro an-dranomasina, ireo no toko telo mahatonga an’i Sainte-Marie manintona mpizaha tany. 4 septembre 2017
Manampy amin’ny fisintonana ireo mpizaha tany ny fisian’ny hetsika ara-kolontsaina. Anisany mitondra anjara biriky amin’ny fampiroboroboana ny fizahantany ao Sainte-Marie i Angelos Adonis filohan’ny komity Festival Tsolabe sy ny ekipany. Miditra amin’ny andiany faha-9 ny Festival Tsolabe tamin’ity taona ity. Izany hoe sivy taona nisiana. Festival anomezan-danja ny kolontsaina Antenosy ary isian’ny hetsika ara-javakanto maro sy ara-panatanjahantena. Ny 31 aogositra lasa teo no nanomboka ary nifarana ny alahady 3 septambra.
Alim-pandihizana ny alakamisy 31 aogositra tao amin’ny efitrano fisakafoanana William Kid Ambodifotatra no nanokafana ny hetsika rehetra. Alim-pandihizana nohafanain’i Vaney’s, JB Junior, Remi, Fafas. Ny marainan’ny zoma 1 septambra, nisy ny diabe mitety tanàna nandraisan’ireo sokajin’olona maro anjara.
Nandritra ny lanonam-panokafana izay natao tao amin’ny kianja Tsolabe ao amin’ny fokontany Ilot-Madame ny antoandron’ny zoma dia nivoitra nandritra ny lahateny nifandimbiasana ny maha zava-dehibe ny fisian’ny hetsika ara-kolontsaina ao Sainte-Marie. Tonga nanokatra ny lanonana tamin’ny fomba ofisialy ny Lehiben’ny Faritra Analanjirofo izay sady filoham-boninahitra.
Sehatra iray ahafahan’ny Antenosy mamoaka ireo kolontsaina misy ao aminy ny Festival Tsolabe. Mpanakanto maro no tonga tao Sainte-Marie nandritra ny efatra andro. Nifanesy nanao fampisehoana ho an’ny vahoakan’i Sainte-Marie tao amin’ny kianja Tsolabe ao Ilot-Madame izy ireo.
Tsy nanameloka an’i Mamy Ravatomanga ny Fitsarana Frantsay FANOSORAM-POTAKA NATAON’NY HVM (244) 18 juillet 2019 Mbola anjakan’ny fitiavan-tena sy ny tombontsoa manokana FILOHA TEO ALOHA RAVALOMANANA MARC (169) 16 juillet 2019 Notolorana mari-boninahitra, nahazo tambin-karama mitenina 250 000 dolara EKIPAM-PIRENENA BAREA (97) 16 juillet 2019 Depiote tsy miankina 21 nanangana vondrona parlemantera iray ANTENIMIERAM-PIRENENA (85) 22 juillet 2019 Notanana am-ponja vonjimaika any Tsiafahy LEHILAHY IRAY NITORAKA POLISY (72) 19 juillet 2019 Nampiray ny Malagasy tsy vaky volo ny Barea KARDINALY TSARAHAZANA DESIRE (67) 16 juillet 2019